Ukuvavanywa kwesikhangeli somnqamlezo kwenziwa ngokuLula | Martech Zone
Ukuba kuphuhliso lwewebhu okanye uyilo lwewebhu, uyazi ukuba owona msebenzi uphazamisayo xa ugqibe uyilo oluhle kukuqinisekisa ukuba isebenza kuzo zonke izikhangeli. Ayisiyiyo kuphela isikhangeli kunye nenkqubo yokusebenza enokuba nefuthe elibi kwindlela iphepha elinikezela ngayo, ngokunjalo neeplagi oziqhubayo!
Sazisa indawo VA Imboleko-mali yeCaptain, othenge umxholo kumntu wesithathu. Endaweni yokuzama ukuthelekelela ukuba ingaba izakusebenza kuzo zonke izikhangeli, iinkqubo zokusebenza kunye nezixhobo, silayishe nje iseti emiselweyo yezisombululo kunye noseto kwi Ukuvavanywa kwesikhangeli somnqamlezo kwaye utsale ii-screenshots ezibukhoma! Nazi iisampulu ezimbalwa:
Isiza sikwabandakanya ukubonwa kwethebhulethi kunye nokuhamba phambili! Nje ukuba usebenze iimvavanyo ozifunayo, Ukuvavanywa kwesikhangeli somnqamlezo ikunika i-URL onokwabelana ngqo nomthengi wakho! Oku kuqinisekisa ukuba umthengi uyaqonda ngokupheleleyo ukuba indawo ayiyilelwanga na okanye hayi Zonke iibrawuza ezidumileyo okanye, kwimeko ye-plugin, inceda ukungqina kubo ukuba ayenziwa nguwe.
Amaxabiso asekwe kwinani le imizuzu Kufuneka uthathe uvavanyo. Iphakheji yokuvula yile $ 19.95 ngenyanga -Qiniseka ukuba ulunciphisa uluhlu lwakho lovavanyo ukuze ungaphelelwa yimizuzu ngokukhawuleza. Kwinyanga yokuqala endiyisebenzisileyo, ndiyakholelwa ukuba ndisebenzise indlela iimvavanyo ezizenzekelayo Ndiyitshise yonke imizuzu yam kwiimvavanyo ezimbalwa ezidwelise isixa esikhulu kakhulu izixhobo, iinkqubo zokusebenza, izikhangeli kunye nezisombululo!
Ngaphantsi kwe- $ 20 ngenyanga, esi sisisombululo esimnandi esiya kuthi sivumele abayili bakho ukuba vavanyo kwisixhobo ngasinye. Ukuba uyinkampani, ziya kukuvumela ukuba ulandele kwaye uqinisekise ngenkxaso yoyilo lwakho ngaphesheya Zonke izikhangeli eziphambili kunye nezixhobo Phambi kokuba uthumele intlawulo yokugqibela!
tags: uvavanyo lwebrawuzaisikhangeli esiphambeneyoukuvavanywa kwesikhangeli
Ukuguqula iidilesi ze-imeyile kubuNgcali boLuntu
Sisiphi isiphelo seFanele yokuThengisa?
Juni 19, 2013 ngo-9: 16 PM
Ukuphuculwa okuhle kwe-Android namhlanje!